कथा – हिटलर::Online News Portal from State No. 4
कथा – हिटलर
राती हिटलरलाई ऐठन पनि प¥यो। उसले कैयन् पटक आफ्नो घाँटी निमोठिएको सपना देख्यो र गुहार माग्न खोज्यो सपनामै। अहँ, पटक्कै आवाज निस्किएन। घ्यार्रघ्यार्र गरेको त मैले पनि सुनेको थिएँ तर त्यतिखेर ऊ त्यति भयावह सपना देखिरहेको होला, मैले कसरी ठम्याउनु? … निकै बेरको संघर्षपछि मात्र उसका आँखा खुले र आँखा खुलेको केही बेरपछि मात्र सहज अनुभव ग¥यो।
तर उसको इच्छा पूरा गरिदिन हाल सम्भव थिएन। मकहाँ नियमित रुपमा दूध पु¥याउने दूधवाला थिएन। त्यसैले दूध वा दूधबाट बनेका पदार्थहरुका लागि बजारमै जानुपर्ने बाध्यता थियो। …. र बजार जाने उपाय थिएन कफ्र्युका कारण।
कट्टाहरु, छुराहरु, हथगोलाहरु, चेनहरु, र बन्दुकहरुको खोजी सुरु भइसकेको थियो। सीमाका चोर बाटाहरुबाट यी कुराहरु भित्रिरहेका थिए।आशा, विश्वास, समझदारीका निम्ति सहर साँघुरो भइरहेको थियो।
स्थिति यस्तो थियो र यस्तोमा ‘दूध’ को सम्भावना थिएन। …. यही कुरा भन्न, स्पष्ट गर्न म हिटलरतिर फर्किएँ तर हिटलर आफ्नो साबिकको स्थानमा थिएन। ऊ बसेको ठाउँमा एउटा सानो चिट थियो र लेखिएको थियो– ‘दूधको खोजी’।
त्यसपछि ठीक अगाडिको एकलैनी पुग्ने गल्लीभित्र बन्द बजारलाई झुक्याएर, मौनताको आँखा छलेर फुत्त पसेँ। सौरभ इलेक्ट्रोनिक्स, भेरी प्रिन्टिङ प्रेस, दिलवाले टेलर्सका बोर्डहरु सायद छक्क परेर मलाई हेरिरहे….। र म सोझै कवाब दुकान र मुसाफिरखानाअगाडि पुगेँ। कवाबका उब्रिएका बासी टुक्राहरु, पातहरु, अण्डाका बोक्राहरु र एकअर्कालाई हिर्काएका ढुंगाहरु बाहेक केही थिएन। हिजोअस्तिसम्मको व्यस्त हटारु बजार टाउकामा हात राखेर अपशकुनको मुद्रामा पसारिएको–थचारिएको देखिन्थ्यो।
… यतिखेर म यी दुवैसित अत्यधिक क्रुद्ध थिएँ। क्रुद्ध त थिएँ तर हिटलरप्रति अगाध स्नेहको भाव पनि थियो मभित्र। .. बिचरो हिटलर, उसका निर्दोष आँखाहरु, आतंकविहीन जुँगा, निश्चल मुहार। … त्यस्ता आँखा, त्यस्तो जुँगा, त्यस्तो मुहार अचेल कुन मान्छेसित बाँकी छ? तानाशाही, बहसीपन, उन्माद– अचेल मान्छेभित्र यी बाहेक अरु के छ?
… र त्यसरी नै सातो गएर सेतो भएको सहर। अब हिटलरलाई खोज्न कुनै ठाउँ रहेन।
….. र हिटलर त्यहीँनेर, अस्पतालनेर, मरासिनीको पि.सि.ओ. अगाडि, भर्खरै खुलेर भर्खरै बन्द भइसकेको चिया पसलमा किनेको दूध पिउँदै, वाल्ल पर्दै, अनौठो मान्दै, डर, विस्मय, उत्सुकता र दिक्दारीका साथ उभिएको थियो।